Nezvedu - Rizhao Feiqing International Trading Co., Ltd.
Rizhao Feiqing International Trade Co., Ltd. iri kuita kugadzirwa uye kutengesa zvinhu zvemitambo uye zvekugwinya michina, kupinza nekutengesa kunze.
Rizhao Feiqing International Trade Co., Ltd.iri iri Rizhao, muswe bapiro Shandong Peninsula uye mvura mitambo guru. Mumakore manomwe apfuura, takagara tichipa vatengi vedu zvigadzirwa zvakanaka, rutsigiro rwehunyanzvi uye kurira mushure mekutengesa basa
Boka redu rinonyanya kubata nemidziyo yekusimbisa muviri, zvemitambo, zvigadzirwa zvepurasitiki, simbi dzesimbi, zvigadzirwa zvemagetsi, zvigadzirwa zvemuti uye machira entsono Kutengeswa kwembatya, bhutsu neheti, zvekushandisa muhofisi uye zvinoshandiswa nemakomputa; kupinza uye kutumira kunze kwenyika zvinhu zvakajairika (kunze kweizvo zvinorambidzwa nemitemo nemirau, uye izvo zvinorambidzwa nemitemo nemirau zvinogona kungoshanda nerezinesi) (kune iwo mapurojekiti anoda kubvumidzwa nemutemo, isu tinogona chete kuita bhizinesi zviitiko nemvumo yemadhipatimendi akakodzera).
Tine chigadzirwa chakanaka uye nyanzvi yekutengesa uye timu yehunyanzvi. Parizvino, pane vanhu makumi maviri vari muchikwata. Kambani yedu ndeyaRizhao hutano Muviri wemidziyo kambani indasitiri, kana iwe uchifarira zvigadzirwa zvekambani uye masevhisi, tarisira mberi kune yako online meseji kana kufona kubvunza